Waar ilayn Shaani ma xishoodo! - SomaliNet Forums
Waar ilayn Shaani ma xishoodo!
Postby Timiro1999 » Sun Apr 14, 2019 6:48 am
Qofku marka dhawr wax isu raacan waxa waajib ah in dadka meel lagaga xidho.
Waxa ka mid ah waxyaalahas
Gaajo ka yaabnimo
Intaas oo dhami waxay ku soo aroortay Muuse shaani
Bal eega odaygan gaboobey ee uu u xoog sheegtay, tolow reer xooshkii mayee maxay odayga uga qaban waayen Muuse shaani.
Markaas oo kale nafta iyo dhiigu waa kaa xaaran.
Re: Waar ilayn Shaani ma xishoodo!
Postby theyuusuf143 » Sun Apr 14, 2019 9:19 am
Haday reer xooshku sacad muuse your yihiin hala laayo si kuwa kale ugu quustaan. Saca qal wayshu ha quusatee. Dhulka dawladaa leh mar hadii uu banaanaa oo aan dhisme iyo dalag toona ku oolin. Masalahana golaha baarlamanka baa guri looga dhisaya,. Ciidagale hayska sii diyaariyo dhulka , haday diidan yagana hala laayo. Dadku waa belaayo Doon ee balaayada haloogu roonado oo aad haloo deeqsiiyo.
Postby Khalid Ali » Sun Apr 14, 2019 10:34 am
Muse bixi will.built the best looking madaxtooyo in east Africa no one can stop the greatest president of our beloved sadaat republic long live the awaited messiah
Postby Timiro1999 » Mon Apr 15, 2019 3:15 pm
Faan weynaa caruur caruur aan lala ciyaarin baa jirta
Dadku ma wada aha reerahan masaakiinta ah qaar waxa jira xataa askarigu qoriguu site kala hadhaya.
Daantoda qofkii dhul banaan haysta waxa lagu yidhaahdaa "yaan reer samatar kaaga murmin" lol ilayn Hargeysa dhul kuma laha waa gadaal ka gaadh
Postby DayrBare » Mon Apr 15, 2019 3:42 pm
Aduu timiroy Ilaahay mala hortagaysaa inuu inabiixi tuug yahay oo uu xoolaha masaakiinta cuno? Majoogtay markuu dadka dhacayay mise cadayn mahaysaa?
Postby kaliil » Tue Apr 16, 2019 4:46 am
[quote=DayrBare post_id=4935004 time=1555360967 user_id=154386]
Postby kaliil » Tue Apr 16, 2019 5:31 am
Postby Khalid Ali » Tue Apr 16, 2019 9:24 am
Dhulka madaxtooyada wala dhisayna madaxtooyada me wala rarayaaa and there is no one that can stop it wala isxaaq affar qof ah. Ileen dhulku is deep in our territory
Postby kaliil » Wed Apr 17, 2019 7:37 am
Postby Khalid Ali » Wed Apr 17, 2019 8:13 am
Cali guray opposed Somaliland govt and now is pro govt because he changed allegiance and also dhagoweyne is muse his good friend why would b oppose his own friend. Besides muses govt has cut down on corruption and is building the land may the messiah live long
Postby Timiro1999 » Wed Apr 17, 2019 10:34 am
Salacalee sidey wax u jiraan, ragii afka ka xumbeyn jirey ilayn Silanyo diid bay ahaayen.
Oday Silanyo iyaguu la hadh geli waayey, hadh iyo habeen way u tirin jireen.
Cali Calyo oo dp caayay oo waslad xaaran ah ka dhigey markii Silanyo joogey markii Shani yimidna dp world waaba mahdigii oo soo daahiray.
Waxaanse ku qoslaa jamal mr diiwanka qosolka iyo Cali calyo oo is lahaa muuse shaani ayaa jago idiin magacaabaya markay afka dhulka dareen
Postby Timiro1999 » Wed Apr 17, 2019 10:37 am
Mr Oromo waa la yaqaana cida afarta qof ah xataa garacdii dhalinta kacaanka iyo oromadii adigaa gurtay
Akhas qurjuf qaarjuf garan waa
Postby Timiro1999 » Wed Apr 17, 2019 10:39 am
Ishaadaa kuu macalin ah, xataa qofka indha aan waxba ka arkayni dhegahuu ka maqlayaa
Postby Khalid Ali » Wed Apr 17, 2019 11:52 am
Jamal jaggo uma baahna
Wa nin wakhtigisa sugayaa laakin mar uun bu Somaliland madax manoqon.
Reer kuul carre iyo affarta isxaaq iyagu marba hakasheekeyaan dhulka habarawal . Dhulkan wa dhul habarawal isxaaq liitana waxba laweydinmayo
Postby DayrBare » Wed Apr 17, 2019 9:55 pm
Islaamnimada Ishaadaa kuu macalin ah mashaqayso, qofwalba waxaa laguxukumaa uun wixii markhaatiyo loohayo.
Ilayn Ben Carson is Married to a Hippo
by Jabuutawi » Mon Nov 16, 2015 4:57 pm » in General - General Discussions
by Lalune View the latest post
Tue Nov 17, 2015 8:19 pm
by Combination_Lock » Thu Dec 14, 2006 12:37 pm » in Europe - UK
Dad hadaad is qabataan Ilayn waad la doodaa Ahmed Mooge
by fanaanYG » Fri Nov 25, 2016 7:56 am » in General - General Discussions
Fri Nov 25, 2016 7:56 am
by Timiro1999 » Mon Nov 26, 2018 6:18 am » in Politics - Somaliland
Mon Nov 26, 2018 6:56 am
Muse shaani press conference
by LeJusticier » Mon Jun 02, 2014 9:18 am » in Politics - Somaliland
by schadenfreude View the latest post
by SahanGalbeed » Wed May 14, 2008 2:25 pm » in General - General Discussions
Wed May 14, 2008 2:37 pm
by ihatechavs » Sat Oct 04, 2008 6:14 pm » in Europe - Netherlands
by kambuli » Thu Dec 16, 2010 4:13 pm » in General - General Discussions
waar deg dega
by MALMAHA » Sun May 31, 2009 2:26 pm » in Politics - Somaliland
Sun May 31, 2009 2:26 pm
Users browsing this forum: Futurist, Surprise and 3 guests